Imveliso yelinen evundlileyo yokuLuka abavelisi kunye nababoneleli - China iVertical Blinds Fabric Factory
Ngaphezulu kweminyaka engama-22 yamava
ISuneTex® iMagicalTex® iSunewell®
Imigaqo yethu ekhokelayo
Imilinganiselo yokuziphatha, nokuziphatha
Abantu kugxilwe kubo
Izizathu ezi-6 eziphezulu zokukhetha thina
I-Greenguard Fikelela kwi-SGS UL
Ilaphu elikhuselweyo lilanga
Iphepha lePolyester elangeni
Ilaphu leFiberglass elangeni
Ilaphu leZebra elikhuselwe elangeni
Roller Blinds Ilaphu
Ipholiyesta mqengqeleki Blinds Ilaphu
Fibreglass mqengqeleki Blinds Ilaphu
IVerman Blinds Ilaphu
Ilaphu le-Shangri-la Blinds
Ilaphu eliyimfama elime nkqo
Ilaphu leHoneycomb Blinds
Ukuhonjiswa kwasekhaya iVerman Blinds Fabric Semi-blackout
Ihowuliseyili Tape ileli Ihowuliseyili Shangri-La Blinds F ...
Ikhaya Ukuhombisa Horizontal Shangri-La Blind Ilaphu Semi-B ...
Shade Shade Shangri-La mqengqeleki Blinds Ilaphu Res ...
Ukuhonjiswa kwekhaya Amabini oMnyama oMfama oLuhlaza kwiOfisi
I-China Decor yabucala iLebra eyimfama eyilaphu yeOfisi yeWi ...
Imibala emininzi yokuLuhlaza iMfama eyi-100% yePolyester
I-Roller Roller Blinds Day-Night-Zebra Curtain Shades ...
Ukuprinta uMnyama weZebra uSuku kunye noBusuku boMnyama oMnyama u-Bl ...
I-China Roller Blinds Day & Night Shades Icandelo leCom ...
China Machine waseMpumalanga Faux Linen Zebra Dual Day kunye ...
China Windows Sun Shade ipholiyesta Sunscreen Rolling ...
Shutter Window Esikrinini Patterned Spring mqengqeleki Bli ...
China Windows Sun Shade ipholiyesta Rolling ezihamba ...
Yangaphandle Manual Window Shutter Isiqingatha Shade Layer Dual ...
Ukuveliswa elangeni Ilaphu Ukusuka China Blinds Facto ...
Ukufundwa kwelanga lokucoca ukuRola iRoller yeLanga ...
Ububanzi ngentando yakho China Windows uhombiso ludilike Co ...
China Umenzi Sunscreen mqengqeleki Blinds Ilaphu Su ...
Ihowuliseyili Anti-UV Fibreglass Ilanga amalaphu Kuba R ...
Isampuli yasimahla yeSemi yokuSebenza okuMnyama okungafunekiyo
I-China Factory yokuNikezela ngeeMpahla eziMnyama eziMnyama ngexabiso loKhuphiswano
Ilaphu eliyimfama elithe nkqo ligama ngenxa yokuba iincakuba zinqunyanyisiwe ngokuthe nkqo kuloliwe ongaphezulu, kwaye zinokufiphazwa ngokukhululekileyo ngasekhohlo nasekunene ukufezekisa injongo yokufiphaza. Imigca ebukekayo, entle nenemibala eqaqambileyo. Icocekile kwaye imfutshane. Iimfama ezime nkqo zemoto zamkela ubume bokujija, kwaye amaphepha amalaphu athe nkqo anokujikeleza iidigri ezili-180. Imoto ingasetyenziselwa ukufezekisa ukufiphala kunye nokurhoxiswa kweemfama ngendlela yokudlulisela umatshini. Iyakwazi ukulungelelanisa ukukhanya kwangaphakathi kwintando, ukuphefumula nokuphumeza injongo yokufiphaza.
Ubuninzi beemfama eziMnyama eziMnyama zinokumnyama-100% yePolyester
Ilaphu eliyimfama elithe nkqo ligama ngenxa yokuba iincakuba zinqunyanyisiwe ngokuthe nkqo kuloliwe ongaphezulu, kwaye zinokufiphazwa ngokukhululekileyo ngasekhohlo nasekunene ukufezekisa injongo yokufiphaza. Imigca ebukekayo, entle nenemibala eqaqambileyo. Icocekile kwaye imfutshane, ilaphu elime nkqo linemisebenzi yokugquma isandi, ukufudumeza ubushushu, ubungqina bokufuma kunye nokukhuselwa kwe-ultraviolet. Kulula ukuyicoca kwaye ayisoze yaphela. Indawo engaphakathi icwangciswe ngokuvumelanayo. Xa amalaphu athe nkqo evaliwe ukuvala ukukhanya kwelanga, i-engile inokuhlengahlengiswa ukonwabela ubuhle bendalo, obudibanisa ubuhle kunye nokusebenziseka. Zininzi iindlela zabathengi abanokuzikhetha ezifanelekileyo indawo zikawonkewonke ezinje ngamagumbi enkomfa, amagumbi e-VIP, iiofisi, izibhedlele, njl.
Umgangatho ophezulu weeMpahla eziMnyama eziPhakamileyo ze-100% yePolyester yasekhaya eyi-Smart
Ilaphu eliyimfama elithe nkqo libizwa ngokuba iilebheli zinqunyanyisiwe ngokuthe nkqo kuloliwe ongaphezulu. Iimfama ezime nkqo zemoto zamkela ubume bokujija, kwaye amaphepha amalaphu athe nkqo anokujikeleza iidigri ezili-180. Imoto ingasetyenziselwa ukufezekisa ukufiphala kunye nokurhoxiswa kweemfama ngendlela yokudlulisela umatshini. Iyakwazi ukulungelelanisa ukukhanya kwangaphakathi kwintando, ukuphefumula nokuphumeza injongo yokufiphaza. Ikhethini ethe nkqo yombane idibanisa ukusebenziseka, ukuqonda amaxesha kunye nemvakalelo yobugcisa kwenye, ngenxa yobushushu bayo, ubuhle kunye nesisa, kuye kwaba lukhetho lokuqala kwizakhiwo zeofisi, iiarhente zikarhulumente kunye neendawo zikawonke-wonke.
Ilaphu elinemibala emi nkqo 100% yePolyester enobubanzi obuyi-89mm
Ilaphu eliyimfama elithe nkqo ligama ngenxa yokuba iincakuba zinqunyanyisiwe ngokuthe nkqo kuloliwe ongaphezulu, kwaye zinokufiphazwa ngokukhululekileyo ngasekhohlo nasekunene ukufezekisa injongo yokufiphaza. Ulondolozo oluqhelekileyo kunye nokucoca ilaphu elime nkqo kungenziwa ngezi ndlela zilandelayo: Ukutsala iimfama rhoqo kunokunciphisa ukuqokelelana kothuli kunye nezinga. Kulondolozo oluqhelekileyo lwamakhethini athe nkqo, ungasebenzisa ibrashi eguqukayo okanye inkohliso yokususa uthuli. Ukongeza, unokusebenzisa isicoci sokucoca ukucoca, isiphumo siya kuba ngcono.
Isitayile esitsha esimi nkqo seMpahla eyi-100% yePolyester enobubanzi obuyi-127mm
Ilaphu eliyimfama elithe nkqo ligama ngenxa yokuba iincakuba zinqunyanyisiwe ngokuthe nkqo kuloliwe ongaphezulu, kwaye zinokufiphazwa ngokukhululekileyo ngasekhohlo nasekunene ukufezekisa injongo yokufiphaza. Umgangatho welaphu elime nkqo liya kuba nefuthe elikhulu kusetyenziso lwexesha elizayo, ke xa sithenga ikhethini ethe nkqo, kufuneka sinikele ingqalelo kumgangatho welaphu elime nkqo. Nazi ezinye iingcebiso zokuthenga ilaphu eliyimfama elime nkqo:
Ukuba imveliso yekhethini ethe nkqo ithengiwe ikhupha ivumba elibi, oko kuthetha ukuba kukho intsalela ye-formaldehyde kwikhethini ethe nkqo kwaye ayikhuthazwa ukuba ithengwe;
Emva kokukhetha umbala wekhethini ethe nkqo, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ikhethini ethe nkqo enemibala ekhanyayo yokusetyenziswa kwexesha elide kunye nokukhuselwa kwendalo. Amakhethini amileyo akhanyayo anokuba ne-formaldehyde esezantsi kakhulu kunye nomngcipheko wokukhawuleza kombala kunamakhethini amnyama athe nkqo.
Isiqinisekiso soMgangatho Ilaphu elimi nkqo elihlala ixesha elide li-100% yePolyester Semi-Blackout
Umbala wekhethini omileyo kufuneka ulungelelaniswe nombala wegumbi lonke. Ukuba ifenitshala imnyama ngesitayile, ikhethini ethe nkqo kufuneka isebenzise iimveliso ezinemibala ekhanyayo, kungenjalo imibala emnyama kakhulu iya kwenza abantu bazive bedandathekile.
2.Isitayile esimfamekileyo esimfamekisayo silula, silungele ezinye iindlela zangoku, ezilula okanye zaseMelika zokuhombisa. Kukulungela ngakumbi ukufakwa kwendawo kunye neefestile zomgangatho ophezulu.
Ukulula kunye nokuLunga okuMileyo okuMfamekisa iLaphu elingashukumi mnyama kwiOfisi
Ilaphu eliyimfama elithe nkqo ligama ngenxa yokuba iincakuba zinqunyanyisiwe ngokuthe nkqo kuloliwe ongaphezulu, kwaye zinokufiphazwa ngokukhululekileyo ngasekhohlo nasekunene ukufezekisa injongo yokufiphaza. Imigca ebukekayo, entle nenemibala eqaqambileyo. Icocekile kwaye imfutshane, ilaphu elime nkqo linemisebenzi yokugquma isandi, ukufudumeza ubushushu, ubungqina bokufuma kunye nokukhuselwa kwe-ultraviolet. Rhoqo kwiinyanga ezintandathu, amalaphu athe nkqo nkqo kufuneka athathwe ukuze acocwe kwaye alondolozwe. Xa ucoca, musa ukusebenzisa iblitshi, ukomisa amanzi emzimbeni kunye nokomisa. Vumela ilaphu elime nkqo limile ngokwendalo, ngapha koko ubunjani belaphu eliyimfama ethe nkqo liya konakaliswa
Idilesi: No. 988 Icandelo eliPhakathi leJiannan Avenue, High-Tech. Indawo, eChengdu, China